Ịgụ Oge: 2 nkeji Bryant Tutterow bụ onye na-ere ahịa nke duru ọtụtụ ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ ọrụ na usoro ha. Ọ na-achọsi ike na nkwalite ọdịnaya, gụnyere mgbasa ozi mgbasa ozi, ebe ụlọ ọrụ ọ na-arụ ọrụ na-enweta nsonaazụ pụrụ iche n'agbanyeghị ihe ọtụtụ ndị nyocha na-agagharị. Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịkpọsa na Bryant na-enyere aka DK New Media na ịgbasa ọ nkwalite ike, oke! Otu ọrụ anyị nyere Bryant wee gaa n'ihu na-enye ndị ahịa anyị bụ
Ịgụ Oge: <1 nkeji Usoro ịde blọgụ na-aga nke ọma adịghị mfe mana ọ bụghịkwa sayensị. Fọdụ folks na-eche na "Ọ bụrụ na ị Blog, ha ga-abịa…" ma ọ dịghị ihe nwere ike ịbụ n'ihu si eziokwu. O doro anya, ị nwere ike ịmịnye ndị mmadụ na blọọgụ gị oge na-aga ma ị nwere ike afọ ojuju na nke ahụ. Mana ọ bụrụ na ịnweghị ụdị ọnụọgụ ịchọrọ iji kwado usoro ịde blọgụ dị ukwuu ma laghachi na oge ị na-emefu,